99 बीएसएफ Maggot Ranch को स्थान। Yurie बीएसएफ
बिना एसएमएस बीएसजी मागगट फार्म को स्थान
तपाईको शहरमा सबैभन्दा नजिकको, आधुनिक, धूम्रपान रहित बीएसएफ खेतको जग्गा प्रशिक्षण मैदान जान्न चाहानुहुन्छ?
यो विधि रिक्त स्तम्भमा हो जुन अहिले शहर हो।
त्यसपछि SEARCH मा क्लिक गर्नुहोस्
अब बुक गर्नुहोस्, कल गर्नुहोस् Yurie BSF
त्रिज्या खोज्नुहोस् 10 मी25 मी50 मी100 मी200 मी500 मी
हालको प्रविधिको सीमाहरूको कारण नक्सामा सूचीबद्ध नक्साहरू गलत छन्।
प्रशिक्षण बुकिङको लागि कृपया युरी बीएसएफए 0812-2105-2808 लाई सम्पर्क गर्नुहोस्
कसरी बीएसएफ मागग खेती
कसरी जग्गा खेती गर्ने
म्याग्गोट बेचन मूल्य प्राप्त गर्न Magfot BSF खेती गर्न को लागि सही तरिका राम्रो तरिकाले बीएसएफ पिंजरे को तैयारी देखि शुरू गर्न को बारे मा चर्चा गरिन्छ, स्वत: मैग्गेट को फसल को लागि।
बीएसएफ म्यागोटको खेती सिक्न धेरै तरिकाहरू छन्, सबैभन्दा सामान्य हो आत्म-अध्ययन वा आत्म-सिकाउने र खेती प्रशिक्षण लिने गरी अन्य तरिकाहरू छन्।
त्यहाँ समूह वा समुदायहरू सामेल गरेर मगगोट बीएसएफ खेती सिक्न तरिकाहरू छन्। प्रत्येक पद्धतिको आफ्नै फायदा र हानि छ।
केवल एक छान्नुहोस् जसले तपाइँको सबैभन्दा राम्रो फिट "शैली" फिट गर्दछ। केही पढ्ने गरेर मात्र बुझ्न सजिलो छ, केहि ट्यूटोरियल भिडियोहरू हेर्न सिक्न मनपर्छ, र केहिले सिधै खेतीमा अभ्यास गर्न मनपर्छ।
तपाईं जहाँ गरिरहनु भएको बेलामा बीएसएफ म्याग्स खेती गर्ने विधि ठीक छ। जब सम्म तपाईं परिणाम बाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। र निस्सन्देह यहाँ परिणाम जनावर फिड आवश्यकताहरु पूरा गर्न सक्षम छन्।
Maggot व्यापार श्रेणी
तपाईसँग मगगट पछि, तपाईंको आफ्नै जनावर फिड को लागी, तपाईले तपाईको व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गरेको छ भने तपाईले चुम्बन बेच्दै हुनुहुन्छ। चुम्बन बीएसएफ खेती विधिको अलावा, म्यागोटको खेती पनि व्यापारको मापनमा आधारित हुन्छ।
होम स्केल माग्गेट खेती
मागोट व्यापार कोटिहरु लाई सानो स्तरीय (घर), माध्यमिक स्तरीय र औद्योगिक स्तरमा विभाजित गरिन्छ। अनुभवको आधारमा यो एक सानो वा गृह स्केल सुरू गर्न सर्वोत्तम हो, पूंजीको भारी नभएसम्म सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाइँ पहिले बीएसएफ जालट खेतीको इन्स र बहिष्कार बुझ्नु हो।
म्यागोटको खेतीको तेस्रो र चौथो चक्रको माध्यमबाट यो प्रक्रियामा र त्यसो गर्दा, मगगको खेती अझ बढी सुखद हुन्छ र परिणामहरू परिणाम हुन्छ।
चक्र एक, दुई र तीनमा, जब तपाईं सिक्नको समयमा धैर्य हुनुहोस्, यो सिफारिस गरिएको छैन कि grasa gruu pingin एक दिन एक दिन फसल काट्न यदि तपाईं एक दिन एक किल पाउनुहुन्न।
यो अधिक यथार्थवादी हुन को लागी ठीक छ तर आत्म, भौतिक, स्रोत र अन्य समर्थकहरूको क्षमतामा समायोजित छ।
यदि तपाइँ प्रकार हो जुन तपाइँको आफ्नै अध्ययन गर्न चाहानुहुन्छ, कृपया शुरुवात बाट मार्केटिङ र बीएसएफ मगग बेच्ने पूरा गाइडको पालना गर्नुहोस्।
बीएसएफ मागगट खेती गाइड
जागा खेती कसरी गर्ने भन्ने निर्देशन
मगगटलाई पशु चारामा कसरी प्रसोधन गर्ने
(पास्ता मैगगोट, फ्लो मैगगोट, मगग पुलेट)
Cultivating Maggots को बारे मा प्रश्न र उत्तर
बीएसएफ जादुई मार्केटिंग
Ranch मा सिधा अभ्यास छनौट गर्नुहोस्
त्यहाँ एक 99 आधुनिक बीएसएफ मगगोट को बिना स्माइल को लागी अधिक स्थान छ
तर यदि तपाईं बढी व्यावहारिक तरिकामा सिक्न चाहनुहुन्छ र तुरुन्तै परिणामहरू छन्। तपाईं नजिकको शहरको खेतीमा सिधा अभ्यास गर्न आएर सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईं केवल नजदीक आधुनिक बीएसजी जागीर खेती प्रकृया बारे जान्नको लागी निकटतम शहर चयन गर्नुहोस्।
मध्यम र ठूलो स्केल मागेगाको खेती
मध्यम र ठूलो मात्रा मागागट पशुधन व्यवसाय सुरु गर्नका लागि, तपाईले सबै भन्दा बढि परिपक्व र योजना तयार पार्नु पर्छ।
मध्यम-स्तरको म्याग्गोट पशुधन सुरु गर्नका लागि तपाईंले यसलाई सजिलै र प्रयोगात्मक रूपमा गर्न सक्नुहुन्न। समय, ऊर्जा र दिमागलाई बर्बाद गर्न यसको अलावा, अन्य क्षतिहरू आर्थिक रूपमा छन्।
विफलताको कारण मानसिक बोझको उल्लेख नगर्ने तपाईंको भविष्यको लागि राम्रो हुने छैन। अध्ययन गर्न को लागी चरणहरू के छन् र मध्यम स्तरमा मागेगेट व्यवसाय खोज्दा हाम्रो चिन्ता हो?
तपाईंले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा घरको स्तरको प्रक्रियामा जान्छ, त्यसपछि घर वा ठूलो मात्रामा विकास गर्नुहोस्। त्यसो कि अनुभव राजधानी अर्को जग्गा खेती व्यापारको विकासमा हाम्रो आधारभूत आधार बन्छ।
एउटा व्यवसाय सुरू गर्नु अघि अन्य प्राविधिक चीजहरू जुन हामीले लिनु पर्छ:
जोखिम कारक को अस्तित्व, मतलब मानसिक तैयारी र योजना तयारी को आवश्यकता हो कि वास्तव मा परिपक्व हो ताकि बेजोड चुम्बन को खेती व्यापार सजिलै संग चल सकते हो।
व्यवसाय सुरु गर्न अघि हामीले गर्नु पर्छ हामीले सुरु गर्नु पर्छ
म्याग्गेट खेती व्यवसाय साँच्चै आफैलाई विकास र भविष्य मा राम्रो तरिकाले राम्रो तरिकाले एक समाधान हो भनेर आफैलाई रूपान्तरण गर्दै।
बीएसएफ मगग व्यापारको राजधानी बसाल्नुहोस्
व्यापार योजना सिर्जना गर्नुहोस्।
यहाँ तयार हुन आवश्यक पर्ने अन्य महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ छन्
सँगै काम गर्दै
यदि हामी एक व्यक्तिगत वा व्यक्तिगत व्यवसाय गर्छौं, त्यहाँ एक साझेदार साझेदार फेला पार्न को लागी कुनै आवश्यकता छैन। तर यदि हामी कम्पनी निर्माण गर्न चाहन्छौ भने, तपाईंले सफलता टीम बनाउनु पर्छ।
विश्वसनीय व्यक्तिहरूको खोजी गरेर सुरू गर्नुहोस्, सक्रिय रूपमा काम गर्नुहोस् र स्थान दिनुहोस् सही स्थानमा दायाँ मान्छे।
व्यवसायी Maggot प्रकार को चयन मा फोकस
मगग खेतीको व्यवसायमा धेरै छनौटहरू, शुरूमा तपाईले म्याग्गोट उत्पादन निर्माण गर्ने प्रक्रिया मार्फत जान्छ जसले निरन्तर र प्रचुर मात्रामा लार्वा लगातार उत्पादन गर्दछ।
लामो अवधिको लागि, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाई बिना गन्धको बीएसएफ खेती व्यवसायको निर्माण गर्नुभयो। एक व्यवसायिक कारक सुरक्षा र सान्त्वना हो जुन अहिले दशैंका लागि दौडिरहेको छ।
यदि तपाईंको चुम्बनको उत्पादन अझै पनि गम्भीर रूपमा छ भने, यसलाई ठीक गर्नुहोस् ताकि यसले जनतालाई समस्या ल्याउँदैन। धेरै चुम्बन उद्यमीहरू जसले प्राथमिकतालाई प्राथमिकता नदिई अब सामुदायिक प्रदर्शनका कारण बन्द छन्।
बिना चुम्बन मागग खेती गर्न पछि, अर्को चरण म्याग्गोट व्यवसायमा विशेष ध्यान केन्द्रित छ।
यहाँ Maggot व्यापार हेरविचार उत्पादनहरू छन्
कार्बनिक ठोस उर्वरक
कक्षा बी कार्बनिक ठोस उर्वरक
पाक कला चुम्बन
मैगागट पशु फिड (मागागा पास्ता, मागागा फ्लो। मगग पुलेट)
कृषि उद्योग (प्रसाधन सामाग्री, प्रसंस्कृत अन्य कारखानाहरु, एक फीड फैक्टरी को निर्माण)
मागेगाट खेती प्रशिक्षण
Maggot व्यापार सल्लाहकार
प्रत्येक उत्पादन र व्यवसाय क्षमताको एक धेरै राम्रो अवसर छ, बस हेर्नुहोस् कि तपाईं वरपर कतिवटा राष्ट्रीय स्तरका पशु फिड कारखानाहरू छन्।
यसले थाहा हुन्छ कि म्यागगोटमा आधारित पशु फिड व्यवसाय क्षमता कति हो।
छनौट गर्नुहोस् र व्यवसाय को प्रकार जान चाहानुहुन्छ निर्णय गर्नु अघि सावधानीपूर्वक सोच्नुहोस्। हामीलाई गलत छान्नुहोस् किनभने हामी पछ्याउँछौं।
एक विशेषज्ञ हुनुहोस्
तपाइँ कुन उत्पादन वा सेवाहरू प्रस्ताव गर्न चाहानुहुन्छ? वितरण कसरी हुन्छ? तपाईं यसलाई कसरी बजार गर्नुहुन्छ? कसले चलाउनेछन् मान्छे? प्रतिस्पर्धी बिक्री मूल्य के हो? तपाइँ यसलाई कसरी प्रचार गर्नुहुन्छ?
ग्राहकहरूको आँखामा सम्भव रूपमा आकर्षक रूपमा उत्पाद प्याकेजिङ कसरी बनाउने भनेर तयार पार्नुहोस्। योजना र मगग व्यवसाय सुरु गर्नु अघि तयार हुनुहोस्।
Maggot बजार (SWOT) जान्नुहोस्
एक सर्वेक्षण गर्नुहोस् र एक बजार विश्लेषण बनाउन को लागी कि तपाईको बजार खण्ड हो, विशेष गरी ती व्यक्तिहरु जुन तपाईंको चुम्बन व्यवसायको लागि लक्षित बजार हुनेछ।
तपाईंको मार्केट टिप्पणीहरू र टिप्पणीहरू बारे जुन तपाईंसँग सुरू गर्ने म्याग्गोट व्यवसायको बारेमा पाउनुहोस्। र बजारमा जित्ने रणनीतिहरू तयार गर्न वर्तमान प्रतियोगीहरू छैनन् भन्दा कम महत्वपूर्ण छैनन्।
व्यापारिक नाम छनौट गर्नुहोस्
व्यापारिक नामहरूमा व्यवसायका नामहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा नाम छनौट गर्न सजिलो छ र BSF को जादुई प्रयास को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
क्यापिटल संसाधन तपाईंको व्यापार कोष कहां छ? के यो व्यक्तिगत राजधानी वा संयुक्त राजधानी बाट हो? यदि तपाईंले योजना गरेको रकम व्यक्तिगत रकमको 100% होइनन्।
त्यसपछि तपाइँ एजेन्सी सेवाहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जुन वित्तीय सहायता प्रदान गर्दछ:
बैंक बाट उधारो
लगानीकर्ताहरूको खोजी गर्दै
एक साथीबाट उधारो
तपाईबाट उधारो लिनुहोस्
व्यापार योजना बनाउने
व्यापार योजना तपाईंको व्यवसायको नीलो प्रिन्ट हो, योजनाको दृष्टिकोण, कम्पनीको दर्शन र मिशन सिर्जना गर्दै लक्ष्य, जुन तपाईले प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ?
दायाँ मगगट उत्पादनका लागि प्रमोशन र मार्केटिङ रणनीति जनावरको खाना बजार आदिको भाग हुन।
व्यापार योजना सावधानीपूर्वक सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्, सावधान रहनुहोस् जब यसलाई बाँच्न गाह्रो बनाउनुहोस्। त्यसो कि तपाईंको व्यवसाय यसको दिशा र उद्देश्य र यसको उपलब्धि अवधिको बारेमा स्पष्ट छ।
व्यापारिक स्थान निर्धारण गर्दै
Maggot व्यापार स्थान एक रणनीतिक स्थान खोज्दैछ। यातायातहरू पहुँच गर्न सजिलो स्थानहरू खोज्नुहोस्,
मिडिया र चुम्बन फिडको प्राकृतिक स्रोतहरूसँग नजिक, संसाधनहरू पूरा गर्ने र श्रमिक लिन सजिलो सहयोग पुर्याउँदछ।
कार्यकर्ताहरूलाई राम्ररी सावधानी दिनुहोस्। सफलता प्राप्त गर्न एक महत्त्वपूर्ण कारकहरू कामदारहरू मात्र काम गर्न सक्षम छन् तर भरोसा गर्न सकिन्छ।
कम्पनीमा "व्यक्ति" को कारण धेरै कम्पनीहरू दिवालिया हुन जान्छ जसले जसले आफ्नो नाममा जीवन बिताउँछ र व्यापार गर्दछ।
मैगगोट व्यापारिक अनुमतिहरू प्रबन्ध गर्दै
व्यापार इजाजत कानूनको आँखामा वैधताको एक पक्ष हो र प्रमाणित गर्नुहोस् कि तपाईं व्यापार कर पछि भुक्तानी गरेर राम्रो नागरिक हुनुहुन्छ।
मगगको प्राविधिक उत्पादन
भौतिक र सैद्धांतिक तैयारी र भविष्यमा हुने यो कदम जब यो खेती चलाउनेछ बाट शुरु हुने मगग खेती गतिविधिहरू जान्न र बुझ्नुहोस्।
बीएसएफ जस्तै एक पिंजरा बनाउनुहोस्
ठूलो मात्रामा अन्डाहरू उत्पादन गर्न हिसिंग र पुनरुत्थान गर्दा मक्खीको रूपमा बीएसएफ पिंजरा।
बीएसएफ प्रजनन एक महत्वपूर्ण घटक हो जुन बीएसएफ खेती गतिविधिहरु को सुचारू चलान को समर्थन को आवश्यकता हो।
दायाँ बागलुङ र मनपर्ने बीएसएफले बीएसएफ अण्डाहरू उत्पादन गर्न र बीएसएफ को दैनिक रखरखावको सुविधालाई सहयोग पुर्याउनेछ, जसमा भवन निर्माण वातावरण जस्तै उकालो कालो सैनिक मक्खी वा कालो सैनिक मक्खन जस्तै स्थानीय वातावरण जस्तै।
बीएसएफ बार्सिलोना बीएसएफका लागि सान्त्वना सिर्जना गर्न सक्षम हुनुपर्छ। बीएसएफ द्वारा पक्षित पिंजरे को मापदण्ड:
बीएसएफ संलग्न सामाग्री
आदर्श आकार (लम्बाइ x चौडाई x ऊँचाई र बीएसएफ पिंजरा पैदलको उचाई)
थप विवरणहरूको लागि, यसलाई कसरी गर्ने बनाउन ट्यूटोरियल भिडीयो हेर्नुहोस् पिडा कि कालो सैनिक उड्छ.
खेती उपकरण र उपकरण तयारी
खेती प्रक्रियाको सुचारू चलिरहेको समर्थनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण उपकरण र उपकरणहरू। उपकरण र उपकरण जस्तै:
अण्डा स्थानहरूको उपलब्धता,
बीएसएफ मक्खीको लागि फिडिंग र पेय ठाउँ,
Maggot बढावा स्थान,
अण्डा र अन्डा इन्सुबेटर
BioTong लार्वा वृद्धि स्थल
फिड र मागेगा खेती मीडिया
मगगको खेतीका मुख्य उद्देश्यहरू माछा र कुखुरा व्यवसायको उत्पादनमा फिडको कुल लागतको 82% सम्ममा पशुको लागि लागत बचत प्राप्त गर्नु हो।
यसैले लगभग नि: शुल्क भोजन र चुम्बकीय मिडिया प्रयोग गर्नुहोस् जस्तै घरको कचौरा, भान्साको कचौरा, बजार बेकारी सब्ज र फलको रूपमा।
अन्य मिडिया गग डंग, बाख्रा, खरगोश, बतख, सुँगुर र चक्कुको कुखुरा आदि जस्ता हुन सक्छ।
फिड र मिडिया
फिड र मिडिया म्यागोट र लागत क्षमताको अधिकतम वृद्धि र उत्पादकतासँग धेरै नजिकको सम्बन्ध छ।
लार्वा लार्वाको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्दछ किनकी पर्याप्त खानाले लार्वाको छिट्टै र चिसोको विकासलाई मद्दत गर्दछ।
बिना गन्ध बिना आधुनिक बीएसएफ चुम्बनहरू खेती गर्न सजिलो छैन, तर अझै पनि उचित व्यवस्थापन चाहिन्छ। खास गरी यदि यो खेती सिर्फ परीक्षण र त्रुटि होइन।
बीएसएफ, ह्याङ ह्याचिंग मिडिया कुनै पनि चीजको हुन सक्छ र सामान्यतया सानो बक्स जस्तै बेसिन र ट्रे वा स्क्वायर बक्सको रूपमा बनाइन्छ।
यहाँ बीएसएफ अण्ड म्यागमा रमाईन्छ र त्यसपछि BioTong वृद्धिमा पठाइयो ...
ट्रे सफा र सजिलो राख्न एक हान्चा कोठा र शेल्फ तैयार गर्नुहोस् दैनिक निगरानी र रखरखाव गर्न।
मध्यम स्तरमा बायोटोंगको प्रयोग निश्चित रूपमा घरको स्तरमा भिन्न हुन्छ, तर यो सिद्धान्त त्यहि नै रहन्छ, जहाँ बायोटोंगसँग2प्रकार हो, बायोटोंग बिना कुनै रैंप हुन्छ जसको कारण मध्यम म्यागगोट र बाईटोंग रैम्पसँग प्रिपिपी माइग्रेशनको लागि एक उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
BioTong का आकार भूमिको उपलब्धतामा समायोजित छ, यसलाई तटस्थ बनाउनुहोस् र विस्तार बढाउने योजना तयार गर्नुहोस् र उत्पादन बढ्दै गर्दा ब्याओटोङ थप गर्नुहोस्।
मिडिया प्रशोधन व्यवस्थापन
फिड उपलब्धता र म्याग्गोट मिडियाको व्यवस्थापन प्रबन्ध गर्न राम्रो तरिकाले तयार हुनु आवश्यक छ, किनभने मीडिया जैविक अपशिष्ट, पशुधन खाडी वा फ्याक्ट्री कचरेको रूपमा रहेको छ जुन फेलो बोसको प्रवृति हो।
फोन: फ्याक्स: इमेल: